Gabadhii la sheegay inay dhaawacday Mrs Mugabe oo diidday xasaanadda la siiyay - BBC News Somali
Gabadhii la sheegay inay dhaawacday Mrs Mugabe oo diidday xasaanadda la siiyay
24 Agoosto 2017
Image caption Grace Mugabe oo lagu eedeeyay inay qaybisada kororntada ku garaacday gabadha dharka xayeysiisa
Haweeneydii ku eedeysay xaaska madaxweynaha dalka Zimbabwe, Grace Mugabe inay xad-gudub u geysatay ayaa sharciga la tiigsatay go`aankii dowladda Koofur Afrika ay xasaanadda diblomaasiyadeed ku siisay Grace.
Gabriella Engels ayaa warqad ay maxkamadda u gudbisay ku sheegtay in iska daaye marwada koowaad ee madaxweyne, uu madaxweyne dal ku guul darreystay inuu xasaanad helo kaddib markii lagu eedeeyay dembi khatar ah.
Grace Mugabe ayaa ka tagtay Koofur Afrika Axaddii, kamana aysan hadlin eedeymaha Engels ee ku aaddan inay si xun ugu garaacday hoteel ku yaalla magaalada Johannesburg.
Booliiska Koofur Afrika ayaa baaritaan ku sameeyay eedeyntaasi xad-gudubka ah, oo dhacday 13-kii August.
Balse waxay ku guul-darreysteen inay xukumaan marwada koowaad, kaddib markii dowladda madaxweyne Robert Mugabe ay u dalabtay xasaanad diblomaasiyadeed.
Dacwad ay u gudbisay maxkamadda sare ee magaalada Pretoria, ayay Engels, oo 20 sano jir ah ku sheegtay in wasiirka xiriirka caalamiga ah ee dalkaasi ay ku takri fashay awooddeeda, go`aankeedana laga sooq aado mid aan sharci ahayn.
Madaxda dalalka ee qof ku dilay amaba ku dhaawacay dalka Koofur Afrika lama siin xasaanad, sidaa darteed ma jirto sabab xaasaskooda loo siiyo ayay tiri Engels.